चट्यांग ला’गेर असईको मृ’त्यु – eSidhakura
मुख्य पृष्ठराजनीतिचट्यांग ला’गेर असईको मृ’त्यु
चट्यांग ला’गेर असईको मृ’त्यु
वैशाख पानीसँगै परेको च’ट्याङ लागेर झापामा एक प्रहरी कर्मचारीको मृ’त्यु भएको छ । मृ’त्यु हुनेमा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) ४५ वर्षीय महादेव ठाकुर रहेको प्रहरी कार्यालय झापाका डिएसपी राकेश थापाले जानकारी दिनुभयो ।
ठाकुर कि’चकवध प्रहरी चौ’कीमा कार्यरत थिए । सोमबार राती पौने १० बजे पानी परेपछि ड्यु’टीमा रहेका अ’सई ठाकुर पानीबाट जो’गिन कि’चकवधको बस्ती नजिकै एक छा’प्रो मु’नि गएर बसेका थिए । सोही बेला परेको च’ट्याङ लाग्दा अ’सई ग’म्भीर घा’इते भएका थिए ।
घा’इते ठाकुरलाई ओम साई पाथीभरा हस्पिटल भद्रपुर पु¥याउन साथ चिकित्सकले मृ’त घो’षित गरिदिएको डिएसपी थापाको भनाइ छ । असई ठाकुर विराटनगरका बासिन्दा हुन् ।
यो पनि –विवाह, नयाँ जीवनको सुरुवात। विवाहपछि खुसी र सुखी जीवन बिताउने सपना सजाएका हुन्छन् सबैले। तर त्यही विवाह जीवन अन्त्यको का’रक बन्ला भनेर कसले सोच्छ र ?
भक्तपुरकी २३ वर्षीया युवतीकाे जीवनमा भयो त्यस्तै। विवाह भएको भोलिपल्टै कोरोना संक्रमित भएकी उनी आइसीयुमा भर्ना भइन् र विवाहको ९ दिनमै भक्तपुर अस्पतालमा जीवनको अन्तिम श्वा’स फेरिन्। माइतीघरबाट अ’न्मिएर बि’दा भएकी छोरी कहिल्यै नफर्कने बाटो गइन्।
भक्तपुर अस्पतालका डा. सुनील ढुंगेलले वैशाख १२ गते आइतबार युवतीलाई अस्पताल ल्याएको बताए। अस्पताल ल्याउँदा उनलाई सुख्खा खो’की र ज्वरो थियो। सा’स फे’र्न गाह्रो भइरहेको थियो। चिकित्सकहरुका अनुसार उनको अक्सिजन लेभल ५० मात्र देखाएको थियो।
चे’कअपको क्रममा उनको दुवै फोक्सोमा नि’मोनिया भइसकेको पाइएको थियो। ‘को’भिडका बि’रामीलाई त्यसै पनि श्वासप्रश्वासको स’मस्या हुन्छ, त्यसमाथि उनको फो’क्सो नि’मोनियाले खाइसकेको थियो,’ ढुंगेलले भने। आ’इसीयु खाली थिएन ।नvनको’भिड वि’रामीलाई सारेर उनलाई आइसीयुमा राखियो।
डा ढुंगेलका अनुसार उनलाई अक्सिजन र को’भिडमा प्रयोग गरिने सबै औ’षधि चलाइयो। उनलाई रे’मडेसिभिर पनि चलाइयो। तर स्वास्थ्यमा केही सुधार भएन। ‘बैशाख १८ गते भेन्टिलेटरमा राखेर शतप्रतिशत अक्सिजन चलाइयो, एकचोटि प्ला’जाथेरापी विधि पनि च’लाइयो,’ उनले भने, ‘तर बैशाख २० गते दिउँसो २ बजे उनको मृ’त्यु भयो। उनलाई बचाउन सकिएन।’
युवतीका परिवारका अनुसार केही दिन अगाडिदेखि उनलाई रुघाखोकी लागिरहेको थियो। ‘मौसम परिवर्तनका कारण सामान्य रु’घाखोकी भनेर बसेका थियो, यस्तो होला भनेर कसले सोचेका थियौं र?’, परिवारका एक सदस्यले भने। अहिलेको अवस्थामा ड’राएर आ’त्तिनु पनि नहुने र न’डराइ सामान्य हो भनेर हे’लचेक्र्याइँ पनि गर्न नहुने अवस्था भएको उनीहरु बताउँछन्।
युवतीका काकाले छोरीको नि’धनबाट परिवार एकदम स्त’ब्ध भएको बताए। ‘विवाहको भोलिपल्ट दु’ल्हन फ’र्काउने चलन छ, त्यसका लागि ज्वाइँको घरमा पुगेका थियौं,’ उनले भने, ‘छोरीले खो’की लागेर गाह्रो भयो भनेपछि ज्वाइँले भक्तपुर अस्पताल नै लैजाउँ भनेर त्यहाँ लगियो, त्यहाँ पिसीआर टेस्ट गर्दा पोजेटिभ देखायो।’
अस्पतालमा आइसीयूमा भर्ना भएकी छोरीको मृ’त्यु भएको खबर बाहिर आउँदा आफूहरु स्त’ब्ध भएको उनले बताए। अहिले परिवारका सदस्यहरु शोकमा छन्। उनीहरुको मागी विवाह थियो। उनले अहिले बेहुलीको आमा, बुवा, ठूलोबुवा र ठूलो आमा पनि कोरोना पोजेटिभ भएर होमआइसोलेसनमा बसिरहेको बताए।
साथै आफ्ना दुई छोरीलाई पोजेटिभ भएको र अवस्था सामान्य भएको पनि उनले बताए। युवतीले एक दिनमात्र दा’म्पत्य जीवन बिताउन पाइन्। उनको अ’न्तिम सं’स्कार पशुपति आ’र्यघाटमा गरिएको थियो। अस्पतालमा स्वयम्सेवकको रुपमा ख’टिएका आरएनए १६ का संयोजक अरुण सैजूले सोमबार दिउँसो २ बजे अस्पतालमा रुवाबासी नै भएको सुनाए।
‘नरोउन् पनि कसरी, वृद्धावस्थामा भएका व्यक्ति वा पहिलेदेखि रो’ग लागेका व्यक्ति भए अर्को कुरा,’ उनले भने,‘केही नभएको नयाँ बेहुली यसरी विवाह भएको १० दिनमा नै नि’धन हुँदा कसको आँ’सु झर्दैन र?’उनले विवाहमा हो’सियारी अपनाउन नसक्दा यो दु’र्घटना भएको बताए।
‘आफन्तलाई कोरोना नलागेसम्म कोरोना केही होइन भनी नबसौं,’ उनले आग्रह गरे। अहिले कोरोना लागेको अवस्थामा आइसीयुमा राख्नुपर्दा आइसीयु नै नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अति आवश्यक परेको खण्डमा मात्र स्वास्थ्य मा’पदण्ड अपनाएर घर बाहिर निस्कौं।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त
एकै परिवारका तीन दिदीबहिनीद्वारा एकैचोटी सगरमाथाको सफल आरोहण
Breaking: काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा १५ दिन थप
प्रधानमन्त्रीकै वक्तव्यमा भाषा भसक्कै
आज १ बजे विश्वासको मत लिँदै ओली, के होला परिणाम ?